Window ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ > Window ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 7:24 PM ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် တခါတလေ လာပီး မေးကြတဲ့ ဝင်းဒိုးမလာတော့ ဘာမှလဲ မတက်တော့ဘူးး ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ အတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်....အဓိကပြောချက်တာက စက်ကြောင့်မဟုတ်ပါ..လက်ကြောင့်ကလိပါများရင်လဲ Window ကျတတ်သလို 😋Official Antivirus Software ထည့်မထားပဲ သုံးနေရင်လဲ Window ကျတတ်ပါတယ်ခင်ဗျားးး☺️☺️☺️
Windows ပြုတ်လို့ ပြန်တင်ရတယ်ဆိုတာ 😊
ဘာကြောင့် Windows ပြန်တင်ရတာလဲ? Windows ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုကြားဖူးကြလားတော့မသိဘူး။
ကျနော်ကတော့ Windows ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို
သိပ်မရှင်းဘူးဗျ။ Service သမားသက်တမ်း2နှစ်အတွင်း
Windows ပြုတ်တယ်ဆိုတာကို ကြားဖူးရုံသာ ကြားဖူးပြီး
ဘယ်လိုပြုတ်တယ်ဆို မမြင်ဖူး၊ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ကိုယ်တွေလို
ကြားဖူးရုံသာကြားဖူးတဲ့သူတွေအတွက် Windows ပြန်တင်
ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Windows ပြုတ်တယ်ဆိုတာ Windows OS ကြီး
တစ်ခုလုံး အစအနမကျန် ပြုတ်ထွက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Windows Activate မဖြစ်လို့လည်း Windows အသစ်
အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့် Windows ပြုတ်တယ်လို့
ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး Windows OS အသစ်ပြန်တင်ရနိုင်ပါတယ်။
2. Virus တွေကြောင့် Windows မတက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီး
3. စက်နဲ့မကိုက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုကို ဇွတ်အတင်းထည့်မိ
လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ Boot မတက်၊ Automatic Repair
ဖြစ်သွားတတ်ပြီး Rebuild Boot, Fix MBR အစရှိတဲ့
Advanced Options ထဲက CmdCommandတွေနဲ့
ဝင်ပြင်တာတောင် ပြင်လို့မရတော့အထိ Error တက်သွားတဲ့
အခါမျိုးမှာ Windows အသစ်ပြန်တင်ရတတ်ပါတယ်။
4. စက်ကိုသုံးနေရင်းတန်းလန်းကြီး အသုံးပြုနေသေးတဲ့
ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို မပိတ်ပဲ ချက်ချင်ကြီး Shutdown ချ
လိုက်မိတဲ့အခါ၊ Desktop တွေဆိုရင် UPS Battery
အားမရှိလို့ သို့မဟုတ် UPS မခံထားတဲ့ စက်တွေမှာ မီးပျက်
သွားလို့ ချက်ချင်းကြီး Shutdown ကျသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ
အပေါ်အချက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ Automatic Repair
5. အရမ်းကိုမှ Date အောက်နေတဲ့ Windows ကို
သုံးနေရလို့ လုက်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ Update ဖြစ်တဲ့
Windows ပြောင်းချင်တဲ့အခါ Windows Update
လုပ် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်တင်ပြီး အသုံးပြုရပါမယ်။
6. လက်ကိုအငြိမ်ထားပြီး အသုံးမပြုပဲ ဟိုကလိဒီကလိနဲ့
အရေးကြီးတဲ့ System File တွေကို လျှောက်ဖျက်မိ၊
မှားဖျက်မိလိုက်ရင်လည်း Windows အသစ်ပြန်တင်ရ
တတ်ပါတယ်။ Batch File တွေရေးပြီး လက်တည့်စမ်းတဲ့
အခါမျိုးမှာလည်း Windows ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။
7. Windows စတင်တဲ့အခါ Windows တင်တဲ့
ခွေ သို့မဟုတ် ISO File က Windows OS ကြီး
အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်တဲ့အထိ File တွေ
မစုံတဲ့ ခွေ ISO File နဲ့ တင်မလိုက်ရင်လည်း အသစ်
စဉ်းစားမိသလောက်သာ ထည့်ရေးထားပါတယ်။ တစ်ခြား
ကျန်သေးလဲ? ဘာတွေကြောင့် Windows ပြုတ်သွားပြီ
Windows အသစ်ပြန်တင်ရတာလဲ? ကိုယ်သိသလောက်
သူများကို ပြန်လည်ဝေမျှတဲ့အနေဖြင့် ဖြေခဲ့ကြပါဦးနော်။
By:Windows 10 Myanmar
Window ကရြခွငျး အကွောငျးအရငျး
[Unicode]ဖတျရနျ တခါတလေ လာပီး မေးကွတဲ့ ဝငျးဒိုးမလာတော့ ဘာမှလဲ မတကျတော့ဘူးး ဆိုတဲ့မေးခှနျးလေးတှေ အတှကျ မြှဝလေိုကျပါတယျ....အဓိကပွောခကျြတာက စကျကွောငျ့မဟုတျပါ..လကျကွောငျ့ကလိပါမြားရငျလဲ Window ကတြတျသလို 😋Official Antivirus Software ထညျ့မထားပဲ သုံးနရေငျလဲ Window ကတြတျပါတယျခငျဗြားးး☺️☺️☺️
Windows ပွုတျလို့ ပွနျတငျရတယျဆိုတာ 😊
ဘာကွောငျ့ Windows ပွနျတငျရတာလဲ? Windows ပွုတျသှားတယျဆိုတဲ့ စကားကိုကွားဖူးကွလားတော့မသိဘူး။
ကနြျောကတော့ Windows ပွုတျတယျဆိုတဲ့ စကားလုံးကို
သိပျမရှငျးဘူးဗြ။ Service သမားသကျတမျး2နှဈအတှငျး
Windows ပွုတျတယျဆိုတာကို ကွားဖူးရုံသာ ကွားဖူးပွီး
ဘယျလိုပွုတျတယျဆို မမွငျဖူး၊ မတှဖေူ့းပါဘူး။ ကိုယျတှလေို
ကွားဖူးရုံသာကွားဖူးတဲ့သူတှအေတှကျ Windows ပွနျတငျ
ရတဲ့ အကွောငျးတှကေို ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
1. Windows ပွုတျတယျဆိုတာ Windows OS ကွီး
တဈခုလုံး အစအနမကနျြ ပွုတျထှကျသှားတာ မဟုတျပါဘူး။
Windows Activate မဖွဈလို့လညျး Windows အသဈ
အောကျပါအကွောငျးတှကွေောငျ့ Windows ပွုတျတယျလို့
ချေါဆိုနိုငျပွီး Windows OS အသဈပွနျတငျရနိုငျပါတယျ။
2. Virus တှကွေောငျ့ Windows မတကျနိုငျဖွဈသှားပွီး
3. စကျနဲ့မကိုကျတဲ့ ဆော့ဖျဝဲလျတဈခုကို ဇှတျအတငျးထညျ့မိ
လိုကျတဲ့အခါမြိုးမှာ Boot မတကျ၊ Automatic Repair
ဖွဈသှားတတျပွီး Rebuild Boot, Fix MBR အစရှိတဲ့
Advanced Options ထဲက CmdCommandတှနေဲ့
ဝငျပွငျတာတောငျ ပွငျလို့မရတော့အထိ Error တကျသှားတဲ့
အခါမြိုးမှာ Windows အသဈပွနျတငျရတတျပါတယျ။
4. စကျကိုသုံးနရေငျးတနျးလနျးကွီး အသုံးပွုနသေေးတဲ့
ဆော့ဖျဝဲလျတှကေို မပိတျပဲ ခကျြခငျြကွီး Shutdown ခြ
လိုကျမိတဲ့အခါ၊ Desktop တှဆေိုရငျ UPS Battery
အားမရှိလို့ သို့မဟုတျ UPS မခံထားတဲ့ စကျတှမှော မီးပကျြ
သှားလို့ ခကျြခငျြးကွီး Shutdown ကသြှားတဲ့အခါမြိုးမှာ
အပျေါအခကျြတဈခုလိုပါပဲ။ Automatic Repair
5. အရမျးကိုမှ Date အောကျနတေဲ့ Windows ကို
သုံးနရေလို့ လုကျငနျးလိုအပျခကျြအရ Update ဖွဈတဲ့
Windows ပွောငျးခငျြတဲ့အခါ Windows Update
လုပျ သို့မဟုတျ တိုကျရိုကျတငျပွီး အသုံးပွုရပါမယျ။
6. လကျကိုအငွိမျထားပွီး အသုံးမပွုပဲ ဟိုကလိဒီကလိနဲ့
အရေးကွီးတဲ့ System File တှကေို လြှောကျဖကျြမိ၊
မှားဖကျြမိလိုကျရငျလညျး Windows အသဈပွနျတငျရ
တတျပါတယျ။ Batch File တှရေေးပွီး လကျတညျ့စမျးတဲ့
အခါမြိုးမှာလညျး Windows ပကျြသှားတတျပါတယျ။
7. Windows စတငျတဲ့အခါ Windows တငျတဲ့
ခှေ သို့မဟုတျ ISO File က Windows OS ကွီး
အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ လညျပတျနိုငျတဲ့အထိ File တှေ
မစုံတဲ့ ခှေ ISO File နဲ့ တငျမလိုကျရငျလညျး အသဈ
စဉျးစားမိသလောကျသာ ထညျ့ရေးထားပါတယျ။ တဈခွား
ကနျြသေးလဲ? ဘာတှကွေောငျ့ Windows ပွုတျသှားပွီ
Windows အသဈပွနျတငျရတာလဲ? ကိုယျသိသလောကျ
သူမြားကို ပွနျလညျဝမြှေတဲ့အနဖွေငျ့ ဖွခေဲ့ကွပါဦးနျော။